Seerlugaa Afaan Oromoo | Oromia Shall be Free
bilisummaa 3 weeks ago	1 Comment
Kuusa galmee jechoota Afaan Oromoo 80000 ol tartiibaan Hibboo Maymaaysa
Hima jechuun maali?
Akkaataa himni itti goodamu
Hima mormeeysa (bal’inaan)
Hima iyyaafateessa (bal’inaan)
Matimoota matim mul’istuu hin maxxanfanne
Maxxantoota hojii fi’ilootaa hojjatan
Gurmmuun jechootaa sirnaan walfaana hiriiranirraa uumamu hiikkaa yoo qabaate, hima jedhama.
Caaltuun bofa ajjeefte.
Intalti diimtuun reefu galte.
Kofoon isaa dhodhoote.
Kanniisni gaagura seene.
Okkoteen suupheerraa tolfamati.
Yoo rabbi sodaattte na dhiisi!
Maal feeta? Naan jedhe.
Himni kamuu qabxiilee afran kanaa gaditti tarrifaman guututti qabaachuu qaba.
a) Tartiibni jechoonni ittiin walfaana bu’an, sirrii tahuu qaba.
b) Dhaamsa hiikkaa qabu tahuu qaba.
c) Hawaasa afaan saniin dubbatu keessatti fudhatama argachu qaba.
d) Yaanni hima saniin himamau dhugooma qabaachu qaba.
“Gabaabduun intalti dhfte reefu”
Hiriirri jechoonni afran fakeenya gararree keessatti mul’ifamanii ittiin walfaana bu’an, sirriimiti. Maalummaan yaada isaa hin hubatamu; hawaasni tartiiba akkkanaatiin afaan Oromoo dubbatu hin jiru. Sababa kanaafiis hima hin jedhamu. Tartiibni sirriin jeconni afran ittiin walfaana bu’u qabu, akkam tahuu qaba?
Filmaata afran kanaa gaditti dhihaate keessa, isa sirrii tahe fili.
2. Dufte reefu intalti gabaabduun.
3. Reefu dhufte intalti gababduun.
4. Reefu dhufte gabaabduun intalti.
5. Intalti gabaabduun reefu dhufte.
Deebisaa sirriin lakkooysa 5 qofa
Fakeenya biroo haa laalluu.
6. Dhale eda keenya sangaan.
7. Biiftuun gara dhihaatiin baati.
8. Allaattiin duumeessarra galti.
Akkuma gartu, sadeen keessa tokko dogongora qaba. Lameen kaan ammoo tartiibni itti kaayame sirriidha. Tokkicha dogongora qabu sun sirreessinee lameen kaaniis haa xinxallu.
Dhale keenya eda sangaan. (dogongora)
Dibichi keenya eda dhale. (sirriidha)
Amma isaan martinuu tartiiba sirrii taheefii, hiikkaa ifatti beekkamu qaban. Dhaamsi isaanii ammoo dhugooma hin qabu. Sangaan hin dhalu; biiftuun gara lixaatiin hin baatu; allaatttiiniis duumeessa gubbaa hin galtu. Hirirri jechoota hamma fedhe sirrii tahuus, yoo dhaamsa dhugaa qabu dabarsuu baannaan, gurmuu hima jedhamu tahuu hin dandayu.
Himni kamuu kutaale lama qaba. Kutaaleen lameeniis matimaafii waahima jedheman. Matimni, kutaa waa’een isaa hima keessatti dubbatamu hoggaa tahu, kutaan waa’ee matima dubbatu ammoo waahima jedhama.
Ijoolleen kudhan walfaana dhufte.
Ijoolleen kurnan torbaan tokko dura dhufte sun, reefu galte.
Matimoota himmeen sadeen keessa jiran beekuun nama hin dhibu, gochi raaw’atame maal akka taheefii eenyuun akka raaw’atame hubachuudha, gaafilee kanatti aanaan gaafachuudhaan. Matimoota himmeen sadeenii beekuun ni dandayama.
Eenyuutu walfaana dhufe?
Eenyuutu reefu gale?
Ijoolleen kurnan torbaan tokko dura dhfte sun,
Himmeen sadeenu matiomoota ifatti mul’atan if keassa qaban. Matimoonni bifa kanaan hima keessatti mul’atan, matimoota ifa jireenyyi jedhaman. Himmeen matimoota ifa jireenyyii if keessa hin qabnees ni jiran. Matima ifa jireessa if keessa dhabuu jechuun ammoo, matimni hin mul’atu jechuudha malee, himni matima hin qabu jechuumiti. Himni matima hin qabne waan hin jirreef matima ni qabaata. Matimni saa ammoo, kan ifatti hin mul’anne tahuun ni mala. Matimoonni hima keessatti ifatti hin mul’annees, matimoota dhokotoo jedhaman. Himmeen matimoota dhokotoo if keessaa qaban bifa kanatti aanuun qindaawan.
Dirree keessatti kubbaa taphachaa jirti.
Deema dhuftee mana geenyaan jiyde.
Matimoota himmeen kanneenii beekuudhaaf, “eenyu” jennee gaafachuudhaan arkanna. Deebiin gaaffii tanaaf arkannu, matiama hima suniiti taha. Matimoonni himmeen kurnaniitiis kanneen asii gaditti tarrifaman tahan.
Tags gochiba gochii hima himmeen iyyaafateeysa jechoota matima mormeeysa qubee Sagalee seera seerlugaa afaan oromoo waahima
Previous KFOn Alaa Manaan Hojitti Jira
Next Sagantaan dorgommii Qur’aanaa magaalaa Finfinnee